August 2016 ~ ဒေါက်တာလီးကြီး
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com. Wednesday, August 31, 2016
Happy Home (ကိုရီးယား ၁၈++)
သူငယ်ချင်း၂တွဲက တအိမ်ထဲမှာ အတူတူအိမ်ငှားနေကြပါတယ်။ ညားခါးစ လင်မယားတွေဆိုတော. လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ်.လဲ တတွဲနဲ.တတွဲ ရှောင်နေရတာနဲ.ပဲ သိပ်အဆင်မပြေလှပါဘူး။ ဒါ.ကြောင်.နေလည်ထမင်းစားချိန် လူလစ်တဲ.အခါ ပြေးပြေးလာပီး တူတူနေကြရပါတယ်။ ဒီကြားထဲ ဟိုဘက်အိမ်က လူကြီးကလဲ
ချောင်းချာင်းကြည်. နေတဲ.အတွက် သူ.ရန်ကလဲ ကြောက်ရပါသေးတယ်။ ညားခါစတွေဆိုနွားသိုးကြိုးပြတ်အတွဲတွေပေါ.။ ကိုရီးယားမလေးတွေက ထုံးစံအတိုင်း အလန်းလေးတွေပါပဲ။ Small File Size (ဖိုင်ဆိုဒ်အသေးဖြင်.ကြည်.ရန်)
Download and Watch with P cloud Link 224MB
beautiful woman warrior (ဂျပန်ပါဝါရိမ်းဂျား အောကား)
အောကားပါ။ ဆင်ဆာမဖြတ်ပါဘူး။ပါဝါရိမ်းဂျား ကောင်မလေး Mizuki, Shino Kamiyama, Rion Asou (Heyzo) ဆို.၃ယောက် လူဆိုးတွေဖမ်းပီး အနိုင်ကျင်.ခံရတဲ. ဇာတ်ကားလေးပါ။ Small File Size (ဖိုင်ဆိုဒ်အသေးဖြင်.ကြည်.ရန်)
Download and Watch with P cloud Link 150MB
ပါးကွပ်လေးနဲ့ စော်လေးကိုချမယ် (အပိုင်း ၂ )
ရန်ကုန်ဆေး (၁) အတွဲ
ပါးကွပ်လေးနဲ့ စော်လေးကိုချမယ် (အပိုင်း ၁ )
Overnight of Love ၂၀၁၅ (ထိုင်း၁၈++++)
Tawan ကမကြာသေးခင်ကသူ.ကောင်မလေးနဲ.ပြတ်သွားခဲ.တယ်။ အတော်လဲခံစားလိုက်ရတော. နောက်ပ် ဘယ်ဆော်မှ မကြိုက်တော.ဘူးဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားခဲ.တယ်။ ဒါပေမယ်.လဲ Praifa နဲ. တွေ.တော. အဲ.ဆော်လေးကိုအရမ်းကြိုက်သွားခဲ.တ်။ အဲ.ဒီတော.Tawan က သူဆော်လေးကဘယ်တော.သူ.ကို မထားသွားစေမယ်.အချစ်နဲ.နည်းလမ်းကိုရှာဖွေတွေ.ရှိသွားတယ်။
ဖိုင်ဆိုဒ်အသေးဖြင်.ကြည်.ရန် Download and Watch with P cloud Link 80MB Read More
Teaching Love (ထိုင်း၁၈+++)
အက်နဲ. ပန်နဲ.က ကမ်းခြေက ဟိုတယ် တခုမှာ အချိန်ပိုင်း အလုပ်ကို လုပ်နေကြတဲ လူငယ်၂ ယောက်။ အက်က ခုချိန်ထိ မိန်းမကို မလုပ်ဘူးသေးဘူး။ ပန်က သူ.သူငယ်ချင်းကို ဆော်ချဖို. အကြိမ်ကြိမ်ဖန်ပေးပေမယ် အက်က တအား၇ှက်တတ်တော. အဆင်မပြေဘူး။ နောက်တော. ဟိုတယ်မှာ မာရီဆာ ကိုတွေ.တဲ.အခါတော. တမျိုးတဖုံပြောင်းလဲသွားခဲ.တယ်။ မာရီဆာ ကလဲ ကောင်လေးငယ်ငယ်လေးတွေကို ကြိုက်တတ်တာဆိုတော. အက်ကို တွေ.ပီးသွားတဲ.နောက်မှာ အချစ်ရဲ. ရသနဲ. အရသာကို သင်ပေးဖို.ဆုံးဖြတ်လိုက်တော.တယ်။
ကြာချိန် ၁ နာရီ ၂၈ မိနစ်
အဲ့ထဲသိပ်မထည့်နဲ့ အရမ်းနာတယ် ( တူမလေးကိုလိုးနေတာ )
အရင်​က အရန်း​ဟော့​နေတဲ့ Pilot ​ကောင်​မ​လေး ​မေပြည့်​စုံ​ကျော်​ဆိုပဲ
နောက်တခေါက်ထပ်လိုးရင်သေတော့မှာ( ငိုနေတယ် )
Body Temperature ( ဂျပန် ၁၈+++)
စက်ရုံ တရုံမှာ အလုပ်လုပ်တဲ.Rintaro က နိုက်ကလပ်မာ အလုပ်လုပ်တဲ. ကောင်မလေးRinkoနဲ. ရည်းစားဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါပေမယ်. တနေ.တော. Rinko က Rintaroရဲ. အိမ်ကို လိုက်သွားတဲ.အခါမှာတော. သူမနဲ. ရုပ်ချင်းဆပင်ပုံစံကအစ တူတဲ. sex doll ကိုတွေ.လိုက်ရတဲ.အခါမှာRintaro ရဲ. စိတ္တဇ ဆန်ဆန် အပြုအမူတွေကို သတိထားမိသွာံးတဲ. ဇာတ်လမ်းလေးပါ။
Download and Watch with P cloud Link 87MB
Madam Scandal Let Me Die for 10 Seconds (1982) အနောက်တိုင်း-ဂျပန် ၁၈+++
အနောက်တိုင်း ဂျပန် အန်စီ ဇာတ်ကားပါ။ အနောက်တိုင်းမင်းသမီးတွေရော ဂျပန်မလေးတွေပါ အလန်းတွေ.ကြရမယ်.ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ လူလတ်ပိုင်း ဂျပန် အမျိုးသမီးသမီး Saji Inui က အမေရိကန်နိုင်ငံ လော.စ်အန်ဂျလိ မြို. မှာ နှစ် ၇၀ ပြည်. ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက် အဖွဲ.အစည်းတခုမှာ အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ.တနေ.မှာတော. သူမကို ဒါရိုက်တာ Shogoro Nishimura က မုဒိန်းကျင်.လိုက်ပါတယ်။ အဲ.ဒါကို သူတို.တပည်. တယောက်က တွေ.သွားတဲ.အခါ ခြိမ်းခြောက် ကာမရယူချင်တဲ. ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ Small File Size (ဖိုင်ဆိုဒ်အသေးဖြင်.ကြည်.ရန်)
Download and Watch with P cloud Link 201MB
Seduction at School (အနောက်တိုင်း အောဇာတ်လမ်းရှ်)
Verführung auf der Schulbank ဆိုတဲ. ဂျာမနီဇာတ်ကားလေးပါ။
Seduction at School ပေါ.။ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားက ရှေးဇာတ်လမ်းအောကားပါ။ ကြည်.နေကျ စူပါဟီးရိုးမူဗီတွေလိုမဟုတ်ဘဲ ဇာတ်လမ်းသွားလေးနဲ. ဆိုတော. အောဇာတ်လမ်းက အလန်းပေါ။ ကျောင်းမှာ စာသင်နေတဲ. ဆရာမက ခပ်ဟော.စော.ဆိုတော. ကျောင်းသားအားလုံးက ဆရာမနဲ. ဖြစ်ချင်နေကြတာပါ။ နောက်ဆုံးတော.လဲ ဘယ်သူနဲ.အဆင်ပြေသွားမလဲ ဆရာမတကယ်ချစ်သွားတဲ.သူက ဘယ်သူလဲဆိုတဲ. ဇာတ်လမ်းလေးပါ။
ကြာချိန်က ၁ နာရီ ၁၉ မိနစ်ပါ။ Small File Size (ဖိုင်ဆိုဒ်အသေးဖြင်.ကြည်.ရန်)
Download and Watch with P cloud Link 175MB
secret travel (ကိုရီးယား ၁၈+++)
Ji-Eu က အကြွေးများလို.စိတ်ညစ်နေတဲ.ကောင်မလေး။
Hye-Ri လူတစ်ယောက်ကိုချစ်ပီးအရာရာအလိုလိုက်ခဲ.ပေမယ်. ပစ်သွားခဲ.လို.စိတ်ညစ်နေတဲ.ကောင်မလေး။
Cho-Hee ကတော. သူမချစ်တဲ.သူတွေတဖြည်းဖြည်းသူမဘေးနာက ခွဲခွာသွားလို.စိတ်ညစ်နေတဲ.ကောင်မလေး။
ကောင်လေးတယောက်ကတော. သူရဲ. တက္ကသိုလ်တုန်းက အချစ်ဦးနဲ.အတူအိပ်ချင်နေတဲ.သူ။
ကောင်လေးတယောက်နဲ. ကောင်မလေးသုံးယောက် အင်တာနက်မှာ စုစည်းမိပီး နော်ကနေ. ကိုယ်ကိုယ်ကို မသတ်သေခင်မှာ ဒီနေ.လိုတနေ.လုံးမှာ တယောက်လုပ်ချင်တာတွေကို တယောက်က ဖြည်.ဆည်းပေးတယ်. ၁၈++ကိုရီးယားဇာတ်ကားလေးပါ။ အဲ.ဒီညမှာ ပျော်ရွှင်မှုရပီးတော. သူတို.လေးယောက် နောက်နေ.မှာကိုယ်.ကိုကိုယ်သတ်သေချင်စိတ် ပျောက်သွားလားပျောက်မသွားဘူးလားဆိုတဲ.ဇာတ်ကားလေးပါ။ Download and Watch with P cloud Link 195MB
နန်းမောင် ရုပ်ပြ (အပြာစာအုပ်)
အပြာစာအုပ်ဖတ်ဖို့ရန် >> ဒီနေရာက၀င်ပါ။
ကျောင်းသူဘဝ ကဲသမျှ (အပြာစာအုပ်)
အပြာစာအုပ်ဖတ်ရန် >> ဒီနေရာက၀င်ပါ။
fbက၇တာ မြန်မာတွေ ကူးထား
download link http://adf.ly/1cVcFd ခိုး၇ိုက်ပဲမြန်မာ
download here http://adf.ly/1cSiqd
download here http://adf.ly/1aY4g5
wechat က ပြတဲ့ မြန်​မာမ
http://linkshrink.net/7kWCrz မြန်မာချောင်းရိုက် အသစ်
ဒီမှာဒေါင်းပါ Blog Archive
beautiful woman warrior (ဂျပန်ပါဝါရိမ်းဂျား အောကား...
အဲ့ထဲသိပ်မထည့်နဲ့ အရမ်းနာတယ် ( တူမလေးကိုလိုးနေတာ )...
အရင်​က အရန်း​ဟော့​နေတဲ့ Pilot ​ကောင်​မ​လေး ​မေပြည...
Madam Scandal Let Me Die for 10 Seconds (1982) အနေ...
ဂျပန်ဇာတ်လမ်း အပိုင်း ၂
ဂျပန်ဇာတ်လမ်း အပိုင်း ၁
9 Songs( 2004) 21+ မြန်မာစာတန်းထိုး
Report error Erotic Ghost Story (1987) မြန်မာစာတန်...
japan avဇာတ်ကားရှည် ၁နာ၇ီကျော်ကြာတယ်
Copyright © 2011 ဒေါက်တာလီးကြီး | Powered by Blogger